China Hydraulic Sylinder Wershada Tubta aan Xumaan lahayn iyo alaab-qeybiyeyaasha |XUANZE
Dhuumaha birta ah ee aan xuduud lahayn ee Haydarooliga ah waxay ku habboon tahay saliidda, dhululubada haydarooliga, farsamaynta makaanikada, dhuumaha derbiga dhumuc weyn, warshadaha kiimikada, tamarta korantada, warshadaha kuleylka, heerkulka sare, heerkulka hooseeya iyo iska caabinta daxalka ee birta birta ah, waxayna ku habboon tahay batroolka, duulista
Dhuumaha birta ah ee aan xuduud lahayn ee Hydraulic waxay ku habboon tahay saliidda, dhululubada, farsamaynta farsamada, dhuumaha derbiga dhumuc weyn, warshadaha kiimikada, tamarta korantada, warshadaha kuleylka, heerkulka sare, heerkulka hooseeya iyo iska caabinta daxalka ee birta birta ah, waxayna ku habboon tahay batroolka, duulista, dhalada, cuntada, ilaalinta biyaha, tamarta korontada, warshadaha kiimikada, fiber kiimikaad, mashiinada caafimaadka iyo warshadaha kale.
Sababo la xiriira culeyska cadaadiska hadhaaga ah ee ku haray lakabka sare ee dhululubada Haydarooliga, waxaa waxtar leh in la xiro dildilaaca yar yar ee dusha sare oo la joojiyo ballaarinta nabaadguurka.Sidaa darteed, caabbinta daxalka ee dusha sare waa la wanaajin karaa, jiilka ama ballaarinta dillaaca daalka ayaa dib loo dhigi karaa, sidaas awgeed xoogga daalka ee tuubada quilted waa la hagaajin karaa.Iyada oo la samaynayo duubista, lakabka lakabka adag ee shaqada qabow ayaa laga sameeyay dusha rogmada, taas oo yaraynaysa bartinimada korka xidhiidhka ee lammaanaha shiididda.
Sidaa darteed, caabbinta xidhashada ee gidaarka gudaha ee tuubada quilting waa la wanaajiyey iyo gubashada ay keento shiididdu waa la iska ilaaliyaa.Ka dib markii la rogo, yaraynta qallafsanaanta dusha sare waxay hagaajin kartaa sifooyinka isku midka ah.
Rolling waa nooc ka mid ah mishiinada bilaashka ah ee chip, kaas oo isticmaala qallafsanaanta caaga ah ee birta heerkulka qolka si ay u jajabiso sinnaanta micro ee dusha workpiece, si ay u bedesho qaabka dusha sare, sifooyinka farsamada, qaabka iyo cabbirka.Sidaa darteed, habkani wuxuu gaari karaa labadaba dhamaystirka iyo xoojinta isku mar, taas oo aan suurtagal ahayn in la shiidi karo.
Si kastaba ha noqotee nooca hab-socodka ee la isticmaalo, waxaa had iyo jeer jiri doona calaamado qalab oo aan sinnayn oo ku yaal dusha sare ee qaybaha, taas oo keeneysa meelaha ugu sarreeya iyo dooxooyinka.
Mabda 'processing Rolling: waa nooc ka mid ah dhamaystirka cadaadiska, kaas oo isticmaala sifooyinka caagga qabow ee birta heerkulka qolka, oo ku dabaqa cadaadis gaar ah dusha workpiece ah by giringiriyey qalab si ay u sameeyaan biraha dusha workpiece soo saaro socodka caag ah. oo buuxi hadhaaga hadhaaga ah ee asalka ah, si loo yareeyo qallafsanaanta dusha sare ee workpiece.Sababo la xiriira qallafsanaanta balaastiigga ah ee birta dusha duuban, qaab dhismeedka dusha waa qabow oo adkaaday iyo badarka ayaa noqda mid fiican, samaynta lakab cufan oo cufan iyo samaynta lakabka walaaca.Adkeysiga iyo xoogga dusha sare ayaa la wanaajiyey, sidaas darteed caabbinta xirashada, caabbinta daxalka iyo iswaafajinta dusha shaqada ayaa la hagaajiyaa.Rolling waa hab wax qabad balaastig ah oo bilaash ah.
Faa'iidooyinka dhuumaha birta ah ee aan kala go 'lahayn ee dhululubada haydarooliga:
1. Qalafsanaanta dusha sare waxay gaari kartaa RA ≤ 0.08 & micro;M.
2. Ovality-ku wuxuu noqon karaa ≤ 0.01mm.
3. Adkeydka dusha sare ayaa la kordhiyaa si loo baabi'iyo qallafsanaanta walaaca, iyo adkaanta waxaa la kordhiyaa HV ≥ 4 °
4. Makiinada ka dib, waxaa jira lakabka walaaca, iyo xoogga daalka ayaa kordhay 30%.
5. Waxay wanaajin kartaa tayada isku midka ah, waxay yareyn kartaa xirashada waxayna dheereyn kartaa nolosha adeegga qaybaha, laakiin kharashka wax-qabadka ee qaybaha waa la dhimay.
Silinder Haydarooliga Dhuumaha birta ah ee aan Xumaan lahayn
Wanaaji stren daalkagth ee tuubada quilted.
Hagaajinta iska caabbinta xidhashada ee gidaarka gudaha ee tuubada quilted.
Dhuumaha haydarooliga saxda ah
Waxaa loo isticmaalaa dareerayaasha, kuleyliyeyaasha, tuubooyinka cadaadiska sare ee aan tooska ahayn ee kuleyliyeyaasha, cadaadiska sare ee qalabka bacriminta, qodista juqraafiyeed, qodista saliidda, dildilaaca saliidda, collars daloolista saliidda, faashashka baabuurta, maraakiibta.
Faa'iidooyinka isticmaalka alaabada hydraulic
Marka la barbardhigo gudbinta farsamada iyo gudbinta korantada, gudbinta hydraulic waxay leedahay faa'iidooyinka soo socda:
1. Qaybaha kala duwan ee gudbinta hydraulic waxay noqon kartaa mid ku habboon oo dabacsanaan leh oo loo habeeyey hadba baahida.
2. Miisaanka fudud, cabbir yar, dhaqdhaqaaq yar oo firfircoon iyo xawaaraha falcelinta degdega ah.
3. Hawlgalka iyo xakamaynta ku habboon, kaas oo xaqiijin kara nidaaminta xawaaraha stepless ee baaxad ballaaran (xeerka xawaaraha wuxuu u dhexeeyaa ilaa 2000: 1).
4. Ilaalinta culeyska xad dhaafka ah si toos ah ayaa loo xaqiijin karaa.
5. Guud ahaan, saliidda macdanta waxaa loo isticmaalaa sida dhexdhexaadinta shaqada, dusha sare ee dhaqdhaqaaqa qaraabada ah ayaa lagu subki karaa keligiis, nolosha adeegguna waa dheer tahay;
6. Way fududahay in la garto dhaqdhaqaaqa toosan/
7. Way fududahay in la ogaado otomatiga mashiinka.Marka kontoroolka isku dhafka ah ee elektro-hydraulic la qaato, ma aha oo kaliya heerka sare ee habka xakamaynta tooska ah ayaa la xaqiijin karaa, laakiin sidoo kale kantaroolka fog ayaa la xaqiijin karaa.
Hore: Daawaynta kulaylka
Xiga: Dhuumaha Qaababka Gaarka ah
Dhuumaha Birta ee Tooska ah ee aan Xirnayn, Dhuumaha Kaarboon Aan Xumaan lahayn, St52 Dhuumaha aan Xumaan lahayn, Dhuumaha Haydarooliga, At 179 Tube aan cillad lahayn, Birta Kaarboonka ee aan Xumaan lahayn,